တပ်မတော်က ထိုးစစ်ဆင်ကြောင်း TNLA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မှားယွင်းဟုဆို - Yangon Media Group
တပ်မတော်က ထိုးစစ်ဆင်ကြောင်း TNLA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မှားယွင်းဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅
တပ်မတော်၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု TNLA ၏ ထုတ်ပြန်မှုမှာ မှားယွင်းကြောင်း တပ်မတော်ပြည်သူ့ဆက်ဆံ ရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်လင်းထွန်းက တုံ့ပြန်ပြောကြား လိုက်သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် စစ်တိုင်းငါးခုအတွင်း စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေအလိုက် စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို ရပ်ဆိုင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးသည့်နောက် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အမှန်တကယ်ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း ငြိမ်းချမ်း ရေးကို ဦးတည်ဖော်ဆောင်နေသည့် ကာလအတွင်း TNLA အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ သတင်းမှားများကို မဖြန့်ဝေသင့်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်လင်းထွန်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်ပြောသည်။
”၂၁ ရက်နေ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေအကုန်လုံးကို စစ်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့လည်း သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း အောက်ကတပ်တွေလည်း တိတိကျကျလိုက်နာပါတယ်။ အဲဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက TNLA အနေနဲ့ကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဒီပြင်အဖွဲ့တွေ၊ EAOs တွေက လည်းကြည့်နေတာပဲလေ။ TNLA အနေနဲ့ အဲဒီလိုသတင်းမှား ထုတ်ပြန်တာမကောင်းဘူး။ မကောင်းဘူးဆိုတာက ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဒါ ထိခိုက်တာပေါ့” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
TNLA တပ်မဟာ (၅)နယ်မြေ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ရွှေမော်အုပ်စု ရွှေမော်ကျေးရွာအနီးတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၂ဝ မှ ၇ နာရီ မိနစ် ၄ဝ အထိ TNLA နှင့်ရှောက် ဟော်မှ မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မ(၁၁)၊ ခမရ (၂၁၉)တို့တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ TNLA တည်ရှိရာ တပ်စခန်းနေရာသို့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ဆင်လှုပ်ရှားလာသောကြောင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း TNLA က ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် စစ်တိုင်းငါးခုအတွင်း စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေအလိုက် စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို ရပ်ဆိုင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး သုံးရက်မြောက်နေ့တွင် တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်း TNLA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မက္ကဆီကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အထက်လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးတို့ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံး
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ကစားရန်ရှိနေကြောင်း သတင်း ထွက်ပေါ်မှုကို ပါဗတ် ငြင်းဆန်
လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ ရဲကင်းလေးခုကို AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တစ်ပြိုင်နက်ဝ??
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တရုတ်ခရီးစဉ်တွင် မြစ်ဆုံကိစ္စဆွေးနွေးမှု မပါဝင်၊ ပြည်သူလူ??